Posted by Tranquillus | Mar 24, 2018 | Tababarka internetka
Raac MOOC on OpenClassRoom si aad si dhaqso ah u kordhiso CV-gaaga
Thanks to farsamooyinka cusub ee macallimiinta, ka dib MOOC ayaa hadda ku jirta meel kasta oo kuwa doonaya inay kor u qaadaan CV dhaqso iyo qiimo ahaan. OpenClassRoom waa shaki la'aan mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha qaybta. Waxaa jira tiro badan oo bilaash ah oo internetka ah oo tayo naadir ah.
Waa maxay MOOC?
Ereygan yar ee qariibka ah ayaa badanaa ku adkaata inuu si cad u sharaxo qof aan aqoon u lahayn barashada fogaanshaha. Si kastaba ha noqotee, ma diiwaangelin kartid OpenClassRoom adoon ogeyn oo fahmin macnaha ereygan xiisaha leh.
Tababbarro furan oo internet ah ama Tababarka Internetka ee Furan
MOOC (waxaa lagu magacaabaa "Mouk") dhab ahaantii macneheedu waa "Koorsooyin Furan oo Isugu Diyaariya" oo ku qoran Ingiriisi. Waxaa badanaa loo tarjumaa "Tababar Waxbarasho ee Aan Dhamaan" (ama FLOAT), luqada Molière.
Kuwani waa dhab ahaan koorsooyinka kaliya ee laga helo webka. Faa'iidada? Waxay badanaa keenaan shahaadada, kuwaas oo aad ku muujin kartid resumeygaaga. Xaaladaha qaarkood, waxaa xitaa suurtagal ah in la helo shahaadada aqoonsi ee Gobolka ilaa Bac + 5. Thanks to dhaqaalaha isticmaalka warbaahinta waxbarashada digital, qiimaha MOOC waa kuwo aan la garaacin. Koorasyada intooda badani waa bilaash ama waxaa lagu beddelan karaa lacag yar oo ka mid ah iftiinka aqoonta la bixiyay.
Shahaadooyinka si kor loogu qaado CV-gaaga si dhakhso ah oo dhakhso leh
Waxaa muhiim ah in la ogaado in MOOCs yihiin kacdoonada dhabta ah ee barbaarinta. Thanks to the Internet, qof kasta ayaa guriga ku tababaran kara guriga isaga oo u mahadnaqaya goobaha kala duwan ee jira. Tani waa fursad gaar ah oo lagu barto raqiis ahaan, ama xitaa bilaash ah, iyada oo fursad u haysata in ay hoos timaaddo ama caqabado dhaqaale.
Hab waxbarasho oo sii kordhaya oo loo aqoonsado shaqo-bixiye
Inkasta oo ay jirto wakhti dheer oo ay tahay in la sameeyo sharciyeynta noocan ah fogaanta barashada ee loo aqoonsado dhamaan loo shaqeeyayaasha Faransiiska, waa in la ogaadaa in shahaadooyinka MOOC qaarkood ay gabi ahaanba ka dhigi karaan faraqa u dhexeeya CV iyo kuwa kale. Shahaadooyinka dhammaadka tababarku waa mid aad iyo aad u qiime badan, gaar ahaan shirkadaha waaweyn ee raba in ay tababaraan shaqaalahooda kharash yar.
Koorasyada internetka ee ay bixiso OpenClassRoom
Tani waa dhamaadka 2015-da xayeysiinta ah. Guddomiyaha François Hollande, Mathieu Nebra, oo ah aasaasaha goobta, ayaa go'aansaday in uu ku deeqo "Premium Solo" oo ah dhammaan shaqa-joojiyeyaasha Faransiiska. Waa hadiyaddan raali gelisa dadka aan shaqeynin ee furay OpenClassRoom si ay ugu sarreeyaan FLOATska ugu caansan ee caanka ah.
Laga soo bilaabo Zero Site ilaa Meel Gaar ah
Dad tiro yar ayaa ka warqabaan, laakiin qolka furan ee hore ayaa loo yaqaan magac kale. Waxay ahayd dhowr sano ka hor. Waqtigaas, waxaa loo yaqaan "Site of Zero". Waxaa daabacay Mathieu Nebra isaga qudhiisa. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd in la bilaabo bilawga bilowga barnaamijyada kala duwan ee barnaamijyada.
Maalin kasta, isticmaalayaasha cusub waxay isku diiwaan galiyaan si ay u raacaan koorsooyinka kala duwan ee loo soo diray internetka lacag la'aan. Sidaas daraadeed waxay noqoneysaa mid deg deg ah oo tixgelin ah si loo sii horumariyo nidaamkan iyadoo soo jeedineysa hab cusub oo waxbarid ah. Inkastoo barashada barashada e-barashada, OpenClassRoom waxay noqotaa xirfadle waxayna si tartiib tartiib ah u noqotaa mastodoon aan maanta ognahay.
READ Tuto.com: Koorsooyinka Waxbarashada Bulshada Si Loo Tababaro Xirfadaha Shaqada.
Koorasyada kala duwan ee lagu bixiyo OpenClassRoom
Markaad noqoto OpenClassRoom, Zero Site waxaa loo bedelay barmaamijka tababarka oo buuxa, oo muuqaalkiisa ugu weyni yahay in la heli karo dhammaan. Diiwaanka tababarka ayaa markaa dib loo casriyeeyaa oo ballaadhanna ballaariyey.
Koorasyo ​​badan ayaa lagu daraa bil kasta, qaarkoodna waxay xitaa qalanayaan. Isticmaalayaasha hadda waxay dooran karaan inay tababaraan dhammaan noocyada mowduucyada, laga bilaabo suuqgeynta si ay u naqshadeeyaan, halka ay marayaan horumarinta shaqsiyeed.
Sida loo raaco MOOC ee OpenClassRoom?
Waxaad dooneysaa inaad kor u qaaddo CV-ga oo aad raacdo MOOC, laakiin ma garanaysid sida loo sameeyo? Mararka qaar way adkaan kartaa inaad doorato qorshaha ugu fiican ee qorshahaaga shaqo. Raac tilmaamahan si aad u aragto si cad oo aad u ogaato nooca aad ku doorato OpenClassRoom.
Keeeeeeeeeeeeeeee in uu doorto OpenClassRoom?
Saddex nooc oo bilaash ah ayaa la heli karaa markaad iska diiwaangeliso mawduuca kumbuyuutarka ee bilaashka ah: Bilaash (bilaash ah), Premium Solo (20 € / bishii) iyo Premium Plus (300 € / bishii).
Baakada bilaashka ah ayaa dabiiciyan ah mid xiiso leh tan iyo markii ay xadideyso isticmaalaha filimaanta 5 todobaadkii. Diiwangashadani si kastaba ha ahaatee waxay kufiican tahay haddaad rabto inaad tijaabiso mishiinka ka hor inta aadan ku dallicin dalab sare.
Kaliya waxaad ka heli kartaa shahaadada Premium Solo waxaad ka heli kartaa shahaado dhameystiran
Waxaa lagama maarmaan ah inaad u tagto Premium Solo subscription, kaas oo ku siin doona fursad aad ku hesho shahaadooyinka qiimaha leh ee dhamaystiran oo kuu sharaxaya CV-gaaga. Qoraalkani waa 20 € oo keliya bishii. Xitaa waa bilaash haddii aad tahay shaqo raadiye, markaa ha ka waaban inaad iska diiwaangeliso mishiinka haddii aad ku jirto kiiskan. Wax kharash ah ma kaa qaadi doonto!
READ Alphorm, IT tababarka ayaa hadda laga heli karaa khadka tooska ah
Si aad dhab ahaan u hagaajisid resumeygaaga, si kastaba ha ahaatee, waa inaad u tagtaa Premium Plus subscription
Waa in la ogaadaa in kaliya xirmada ugu qaalisan (Premium Plus sidaas darteed) ay siinayso helitaanka koorsooyinka diblooma. Haddii aad qorsheyneyso inaad si dhab ah u kobciso taariikhdaada manhajka, waxaad gebi ahaanba dooran doontaa rukunka 300 € / bishii. Waxay kuxirantahay koorsada la xushay, waxaad fursad uheli doontaa inaad hesho dibloomooyin sax ah oo Gobolku aqoonsan yahay. OpenClassRoom, heerka wuxuu udhaxeeyaa Bac + 2 iyo Bac + 5.
Inkastoo marka la barbardhigo labada dal oo kale oo ay soo bandhigtay bandhigga, waxay u egtahay mid sare, horudhaca Premium Plus ayaa weli ah mid xiiso leh dhaqaale ahaan. Xaqiiqdii, khidmadda kharashka dugsiyada qaar ka mid ah ayaa ah mid aad uga jaban koorsooyinka shahaadada ee laga helo OpenClassRoom.
Raac MOOC oo ku yaala Openclassroom si aad si dhaqso ah u kordhiso CV-gaaga July 19th, 2018Tranquillus
horeHagaha Habboon ee ugu Fiican Habboon Jarmal
socdaSamee Iftiinkaaga Shaqo Lagu Tilmaamo Tilmaamaha Fiidiyoowga Elephorm